RASMI: Liverpool Oo Xaqiijisay Inuu Soo Idlaaday Xili Ciyaareedka Chamberlain, Miyuu Seegi Doonaa Koobka Aduunka 2018? – Gool FM
(Liverpool) 25 Abriil 2018 Liverpool ayaa ku shaacisay shabakadeeda rasmiga ah in uu soo idlaaday xili ciyaareedka laacibkeeda Alex Oxlade-Chamberlain, kadib dhaawacii kasoo gaaray dhanka jilibka kulankii xalay ay kula ciyareen AS Roma lugta hore wareega afar dhamaadka tartanka Champions League garoonka Anfield.
War saxaafadeedka kasoo baxay kooxda Liverpool ayaa lagu yiri: “Chamberlain wuxuu seegi doono kulamada kaga dhiman xilli ciyaareedkan ee kooxda Liverpool, iyo sidoo kale Koobka Adduunka ee Russia xulkiisa qaranka England”
“Oxlade-Chamberlain ayaa haatan bilaabi doona barnaamijka baxnaaniska si uu ugu laabto qaab ciyaareedkiisii hore ee buuxa sida ugu dhaqsiyaha badan, isagoo ku soo laabanayo xilli ciyaareedka soo socda.”
Reds ayaa xaqiijisay in dhaawaca Chamberlain uu ka maqnaan doono inta ka dhiman xilli ciyaareedkan kulamada ay ciyaari doonto kooxda Liverpool, sidoo kale wuxuu xidiga xulka qaranka England seegi doonaa koobka aduunka soo aadan ee lagu qaban doono dalka Russia
24 jirkan ayaa maray baaritaano caafimaad oo ay aroornimadii saakay ku saameeyeen waaxda caafimaadk ee kooxda Liverpool, mana jiro jadwal gaar ah ee loo qorsheeyay inuu ku soo laabto, si uu kaga soo kabto dhaawaca soo gaaray.
Sida laga soo xigtay kooxda Liverpool, xiddiga heerka caalami ee dalka England ayaa haatan bilaabi doona barnaamij gaar ah ee baxnaanin ah, si uu u suuragaliyo inuu dib ugu soo laabto garoomada isagoo awood badan xili ciyaareedka soo aadan.
Allianz Arena oo si qurux badan loo diyaariyay ka hor kulanka caawa (SAWIRRO)